Amathiphu Okuphoqelela Kusuka Ku-Semalt On Indlela Ongayifuni Ikheli le-IP Kusuka ku-Google Analytics yakho
Ukungafani nekheli lakho le-IP kusuka ku-Google Analytics yakho kubalulekile njengokuhlelwa komkhankaso wakho. Ukuze ugcine idatha yakho inembile futhi ihlanzekile, cabanga ukufaka i-Google Analytics kuwebhusayithi yakho. Ngemuva kokufaka nokubuyekeza i-GA kuwebhusayithi yakho, susa ikheli lakho le-IP ukuze ugweme ukuxubana nezivakashi zakho ezingahle zithole izindleko. I-traffic yangaphakathi akugcini nje ukuhlambalaza nezivakashi zakho ukuhlaziya amazinga kodwa futhi kuthinta imibiko yakho kabi.
Emasontweni amathathu adlule, ukuhamba kwebhola kanye nomgwaqo wangaphakathi ovela ehhovisi kuye kwaba nomthelela kumininingwane yamakhasimende amaningi. Izipele zokudlulisela kanye nezokugcoba nazo ziye zaba nomthelela emotweni yangaphakathi ngendlela enkulu - barmah hats australia price. Ukukhuthaza ukubandakanya komsebenzisi kubaluleke kakhulu lapho kusebenza i-Search Engine Optimization. Hlanganisa ikheli lakho le-IP, ama-spiders awaziwayo kanye ne-bots kusuka kudatha yakho ukuze uzuze idatha engokoqobo.
Sebenzisa amathiphu anikezwe ngu-Oliver King, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , ukuhlunga ugaxekile, ugaxekile ogaxekile, nekheli lakho ngokuphumelelayo.
Kungani Kudinga Ukungaxhasi ikheli lakho le-IP kusuka ku-Google Analytics yakho
Ukusebenza kwiwebhsayithi yakho kunomthelela emotweni yangaphakathi. Lapho wena nabasebenzi bakho beqhubeka nokuchofoza emakhasini amawebhusayithi wakho, inani le-isivakashi liyanda. Iklayenti elinabasebenzi kufanele futhi ingabandakanyi amakheli abo e-IP ngokuphelele. Ukubaluleka kokugcina izinga lakho lokunciphisa elincane emkhankasweni wakho Wokusesha Injini Ye-Search akukwazi ukugcizelelwa kahle. Izinga lokunciphisa lidlala indima enkulu ekuguquleni i-keyword rankings yakho.
Izinga lokunciphisa kakhulu lilinganiswa nenani lamakhasimende avakashela iwebhusayithi yakho bese echofoza emuva. Ukugcina amazinga wakho wokuncintisana kukuqinisekisa ukuthi labo abavakashele ikhasi lakho bakwazi ukuhamba ngamakhasi amanye..Ukungafani nekheli lakho le-IP kusuka kusayithi lakho linciphisa amazinga wokunciphisa, ngakho-ke igama lakho elinguquko libhekwa njengelifanelekile yi-Google.
Indlela Yokungafaki Ikheli Lakho le-IP Kusuka ku-GA yakho
Ukungafani nekheli lakho le-IP kusuka ku-Google Analytics yakho kuhlanganisa inqubo yenqubo. Landela le nqubo ukuze ugweme ukungcola ngemininingwane yakho.
1) Chofoza inketho ethi 'Ukubika Okulandelayo' futhi useshe iwebhusayithi yakho.
2) Ekhoneni eliphezulu eliphezulu, chofoza inkinobho 'Admin'.
3) Hlola isixhumanisi sakho sedatha yakho bese uchofoza ukuze ube nombono.
4) Chofoza kuzihlungi ezizenzakalelayo eziza ne-Google Analytics.
5) Chofoza kwi 'Izihlungi ezintsha'. Kulesi sigaba, ungakwazi ukukhipha ikheli lakho le-IP ngaphandle kokubhekana nobunzima.
6) Hlola ebhokisini lokudonsa elikhonjisiwe ku-GA yakho, bese ukhetha 'Hlanganisa'. Qhubeka futhi ukhethe 'ithrafikhi kusuka ekheli lakho le-IP'.
7) Izindlela ezimbili ezisetshenziselwa ukuhlola ikheli lakho le-IP. Ungathola ikheli kusuka kumugqa wakho womyalo wekhompyutheni ngokulungisa i-IP yakho noma ukuthayipha i-HTTP ecela ikheli lakho.
Emva kokuthola ikheli lakho le-IP, buyela ekhasini lakho le-Google Analytics, bese ukondla ekhelini lakho emabhokisini egeji. Chofoza ukulondoloza ukuze uhlunge futhi ungafaki ikheli lakho le-IP kusuka kuwebhusayithi yakho naku-Google Analytics yakho. I-spam yokudlulisa, ama-bots, nezinsipho ziye zaba yinto enzima kakhulu kumabhizinisi ase-intanethi emavikini ambalwa adlule. Ukugcina izinga lakho lokunciphisa phansi futhi ukuthola idatha ehlanzekile yomkhankaso wakho kubaluleke kakhulu.